Gudoomiyahii magaalada Cadan ee Yemen oo Weerar lagu Dilay – Radio Daljir
Gudoomiyahii magaalada Cadan ee Yemen oo Weerar lagu Dilay
Diseembar 6, 2015 6:30 b 0
Somalia, December 06, 2015-(Daljir)_ Jeneral Jacfar Maxamed Sacad iyo 6 ka mid ah Ilaaladiisa ayaa saakayto lagu dilay Degmadda Altawaahi oo ku taalla magaalladda Cadan, kadib, markii lala soo beegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Qaraxa ayaa lala beegsaday gaarigiisa xilli uu ka soo baxay gurigiisa, kuna sii jeeday Xafiiskiisa, wuxuuna Jeneraalka kaalin ka qaatay sidii Maleeshiyadda Xuutiyiinta looga saari lahaa magaalladda Cadan iyo Degaano kale.
Madaxweyne C/rabbu Haadi Mansuur ayaa la sheegay inuu la wareeay Hoggaaminta Amniga, kadib, markii la dilay Jeneraalkaasi.
Dhinaca kale, Wada-xaajoodkii Nabadda ee Dowladda Yeman iyo Maleeshiyadda Xuutiyiinta ayaa la iclaamiyey inuu furmi doono bishan December 15-da.
Dagaalka Yeman waxaa ku geeriyootay in ka badan 5,700 oo qof. ,waxaan dilkan sheegatay ISIL
Al-Shabaab oo Dishay Ajnabi Damcay ku Biirista Daacish
Nabadoon lagu xiray magaalada Bosaaso